कोरोना कहर : ८ दिनमा ३६ को मृत्यु, बढी जनघनत्व भएका शहरमा उच्च जोखिम – Mission Khabar
कोरोना कहर : ८ दिनमा ३६ को मृत्यु, बढी जनघनत्व भएका शहरमा उच्च जोखिम
मिसन खबर २९ श्रावण २०७७, बिहीबार ०९:३५
काठमाडौं । लकडाउन खुलेपछिको २२ दिनमैै नेपालमा ५४ जनाको कोरोना संक्रमणबाट मृृत्यु भएको छ । यो अवधिमा ६ हजार ४ सय ३८ संक्रमित थपिएका छन् । लकडाउन खुल्नुअघि ४० जनाको मृत्यु भएको थियो भने साउन ६ गतेसम्म संक्रमितको संख्या १७ हजार ९ सय ९४ रहेको थियो ।
पछिल्लो २२ दिनमा बढेको संक्रमण र मृत्यु दरले नेपाल कोरोनाको जोखिम थप बढेको देखाएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले कोरोना संक्रमणले मृत्यु हुनेको कुल संख्या ९१ पुगेको जनाएपनि बुधबार साँझ थप ३ जनाको मृत्यु भएसँँगै ९४ पुुगेको छ । किस्ट अस्पतालमा दुई जनाको मृत्यु भएको छ भने ह्याम्स, मेडिसिटी, पाटन, बीपी कोरोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र बुटवल कोरोना विशेष अस्पताल र कोशी कोभिड अस्पतालमा एक/एक जनाको मृत्यु भएको छ । यस्तै सप्तरीमा संक्रमण पुष्टिपछि अस्पताल लैजाँदै गर्दा, महोत्तरी र बारामा मृत्युपछि संक्रमण पुष्टि भएको छ ।
पछिल्लो ८ दिनमै ३६ को मृत्यु
साउन २० गतेसम्म नेपालमा कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) का कारण ५८ जनाले ज्यान गुमाएका थिए । २१ गते एकैदिन ६ जनाको मृत्यु भयो । २४ गतेबाहेक हरेक दिन संक्रमितको मृत्यु भइनै रह्यो । बुधबार एकैदिन ११ जनाले ज्यान गुमाएका छन् । ८ दिनमा कोरोना संक्रमणका कारण ज्यान ३६ मध्ये १७ जनाको मृत्यु उपत्यकाका अस्पतालहरुमा भएको छ । ७ जना पर्साका अस्पतालमा । धनुषाका ३, मोरङका २ र काभ्रे, सिन्धुपाल्चोक, सिरहा, सुनसरी, बाँके, सप्तरी, महोत्तरी र कास्कीका११ जनाले पछिल्लो ८ दिनमा ज्यान गुमाएका छन् ।
के भन्छन त विज्ञ ?
सरुवा रोग विशेषज्ञ डा. शेरबहादुर पुनका अनुसार पछिल्लो समय बढदै गएको संक्रमण र मृत्युले कोरोनाको महामारी थप बढेको संकेत गरेको छ । दक्षिणी छिमेकी मुलुक भारतमा संक्रमणको ग्राफ नघटेसम्म नेपालमा जोखिम कम नहुने दाबी गर्ने डा. पुन भन्छन्–पछिल्ला मृत्युहरुले संक्रमण अरु देशमा जस्तो खराब अवस्थामा जाने त होइन भन्ने जोखिम बढाएको छ । आगामी दिन झन चुनौतीपुर्ण बन्दै जानेतर्फ सरकार र आम सर्वसाधारण सचेत बन्नुपर्छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतम भने आम नागरिकको लापरवाही नघटेसम्म जोखिम कम नहुने बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘जनताले आवश्यक स्वास्थ्य मापदण्डको पालना गरेर राज्यलाई सहयोग नगरेसम्म राज्यले एक्लैले मात्र केही गर्न सक्दैन ।
बुधबार मात्रै पनि ४८४ जना संक्रमित थपिएर कोरोनाका कुल संक्रमितको संख्या २४ हजार ४ सय २३ पुगेको छ । काठमाडौं उपत्यकामा मात्र बुधबार १३९ जाना संक्रमित थपिएका छन् । सरकारी कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी, स्वास्थ्यकर्मी र घरमै बसेका स्थानीयमा सरेको संक्रमणले काठमाडौं उपत्यका सहित बढी जनघनत्व र चहलपहल भएका शहरमा जोखिम बढेको छ ।
ट्याग : #breaking, #कोरोना, #कोरोना भाइरस (कोभिड–१९), #कोरोना विशेष अस्पताल, #कोरोनाको महामारी, #संक्रमण र मृत्यु, #संक्रमितको मृत्यु, #स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय